Daawo:Wasiirka Qorshaynta JSL oo kulan La Qaatay Hay’adaha Islaamiga ah ee ka hawlgala Dalka |
Daawo:Wasiirka Qorshaynta JSL oo kulan La Qaatay Hay’adaha Islaamiga ah ee ka hawlgala Dalka
Wasiirka Qorshaynta Qaranka JSL oo kulan la yeeshay Hayadaha Islaamiga ah ee ka hawlgala Arimaha aadami -nimada. Shirkan ​oo u gudoominayay Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Somaliland Mud. Maxamed Ibraahim Aden (Qabyo tire) ayaa waxa ku wehelinayey Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Agaasimaha Waaxda isu-duwida ee Wasaaradda, La taliyaha Wasaaradda ee dhinaca Hayadaha isalaamiga iyo xubin ka socday gudida taakulaynta abaaraha ee heer qaran.
ujeedada shirkan sidii la islula eegi lahaa ka qayb qaadashada taakulaynta dadka ka soo doogay abaaraha iyo sidii ay hayadahani u soo gudbin lahaayeen qorshayaashooda mashaaricda ay ugu talagaleen taakulaynayo dadka abaaruhu ay saameeyeen.
Waxa kale oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkan lagaga wada hadlay ka mid ahaa Xoojinta xidhiidhka wada shaqayneed ee ka dhaxaynaya Wasaaradda iyo Ururada isalaamig.
Kulankan ayaa intii uu socday waxa warbixino iyo falanqayn iswaydaarsaday ka soo qaybgalayaasha, waxaana la isla qaatay in hayadaha islaamiga ahi ay ka qaybqaataan qaadhaanka loogu talagalay taakuleynta jilicsan ee abaarahu saameeyeen.Waxa kale oo la isla meel dhigay in mudo todba casha ay ku soo gudbiyaan hayadaha islaamiga ahi qorshahood ku aadan mashaariicda taakulaynta iyo wixii qaadhanaba.
Waxa gabagabadii halkaasi ka hadlay xubno ka socday hayadaha islaamiga oo ka dareen celiyey kulanka kuna timaamay mid midho dhal noqon doona iyagoo balan qaaday inay si buuxda ula shaqayn doonaan Wasaaradda.Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Somaliland Mud. Maxamed Ibraahim Aden (Qabyo tire) oo kulankan soo xidhay ayaa ugu horeyn uga mahadnaqay ka soo qaybgalayaasha, waxaanu ku dheeraaday sida loo dardargalin doono imika wixii ka danbeeya wada shaqaynta labada dhinac.
– Xoojinta xidhiidhka wada shaqayneed ee ka dhaxaynayaa Wasaaradda iyo Ururada isalaamiga
– Dajinta nidaam laba geesood ah oo ay kuwada shaqyn doonaan labad dhinac.
– Meelaynta iyo qaabaynta mashaariicda